Hoobal yaan la hilmaamin!! (Qormo Xusuus iyo Taariikh wadata) | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
“Mootada la raaciyo. Taksi lagu mirqaamaa. Muruqmuruqda Suuqyada. Macno yeelan meeysee. Muruqiina maaloo. Dhulka mira ku beertoo. Macdanta, Dahabka, Muujiya wanaagga”.
Ma yara Heesaha Af Soomaaliga ah ee ay Dhagaheenu maqlaan Maalin iyo Habeen walbaaba. Mana yara Hablaha Codadka Halaasiga ah leh ee inoo heesa. Oo waliba ma yara kuwa Muuqaalada la duubay aan ka daawano Heesahooda.
Waa Xilliga iyo Xaalkiisa!! Waxaase hubaal ah in tani ay ku timid Dadaal iyo Howl adag oo Horay-joogyadeenii Fanku ay soo bixiyeen. Ee miyaanay ahayn inaan is warsanaa, Sooyaalkii Fanka Hablaha Soomaalida, si aynu bal u garano inaan Nus Qarni ka hor oo Xilligay Heesuhu Suugaanteena kusoo xogeysteen ah aanay sidan u sahlanaan jirin Hablaha Codkooda ugu bareeraya inay ku heesaan oo Dadkuna dhagaystaan?
Waxaa Sharaf ii ah, inaan Faalladeydan Maanta, kusoo qaato Sooyaalka Fanaanadda Caanka ah ee Khadiija Cabdullahi Cameey (Dalays), oo ka mida Gabdhaha Heesa ee Soomaalida, balse iyadu la gaar ah Astaan ay Gabdhahaas abidkeedba kaga soocanayd!! Waayo waxay ahayd Gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliyeed oo Hees u bareerta, Codkeedana ay toos u dhagaystaan Dadkii ku noolaa Muqdisho iyo Hareeraheeda, Goortaas oo ay Dhibaato badan la kulantay Heesitaankeedaas dartiis.
Dalays oo Wareys dheer lala yeeshay, waxay xasuusatay Maalintii ugu horeysay ee ay Hees Codkeeda ku qaaddo oo ay tiri waxay ahayd Maalin Khamiis ah,November 14, 1952-kii. Raadiyihii Muqdisho ayeey ka qaadday Hees ay isla Goobta ugu sameeyeen Rag Qaybta Fanka ee Raadiyaha ka shaqayn jiray oo ay ka xustay Xuseen Baajuun iyo Maxamed Saciid.
(Hoobaan u ekoow. Mar ila hadalee. Hamigaa badanee. Miyaan isla hadal. Horay u qabay) Waa Heesteedii ugu horeysay ee Raadiyahaas laga dhagaystay Duhurnimadii Maalintaas Khamiista ah, oo waliba Dadka Muqdisho ay Goobo kooban isugu imaan jireen si iyagoo Dhulka fafadhiya ay Raadiyaha u dhagaystaan.
Intaynaan horay usii galin Heestaas iyo wixii ay kala kulantay. Khadiija waxay sheegtay inay ku dhalatay Berdaale oo Baydhabo ka tirsanayd, gaar ahaanna Xaafad la yiraa Buula gaduud, halkaasna ay Dugsiga Quraanka ka baratay.
Iyadoo Iskuulka dhiganaysa, oo Ardayda Xilliyada qaar u heesta, ayeey Maalin ay Imtixaan kasoo baxday waxay Wargeys Muqdisho kasoo bixi jiray oo Koryeera Dela Somala la oran jiray ka aqrisay in Raadiyaha Muqdisho uu doonayo Gabar Heesi karta, durbadiibana Goobtii ayeey tagtay, halkaasoo Raggii joogay ay aad ula yaabeen Ujeedkeeda.
Khadiija Dalays oo sii sheekeyneysa, waxay xustay in markii Heesta ay qaadday oo Magaalada laga wada dhagaystay, ay Maalintaas Maalintii ku xigtay oo Jimco ahayd, dhamaan Masaajiddii Muqdisho ku yiilay Culimada iyo Dadku isagasoo bexeen oo lagu hor banaanbaxay Gurigeeda iyo Raadiyaha Muqdiso, iyadoo lagu qaylinayo in Gabadha yar ee Heestay iyo Waalidkeedba ay Gaaloobeen.
Aabaheed oo aad uga carooday Gaalnimada isaga iyo Gabadhiisa lagu suntay, ayaa ku dooday in Gabdho Muslimiina oo Heesa ay Dunida jiraan, wuxuuna tusaale usoo qaatay Umu Kaltuum oo Goortaas Masar caan ka ahayd. Odaygana wuxuu ku adkeystay inay Gabadhiisu heesi doonto, sida ay Khadiijaba tiri.
Sidaas buu Fankeedu u tis-qaaday, Tiyaatara Duuna oo Xaafadda Fiyooraha ee Wardhiigley ku yiilay ayeeyna inta badan Xilligaas kasoo muuqan jirtay, iyadoo Sanadihii kala ahaa 1955, 1957 iyo 1959, heshay Bilado ay ku muteysatay Tartan Faneedyo ay Dad Talyaanigii Dalka Gumeysanayay u dhashay kula gashay Tiyaatarkaas.
Iyadoo Waaya-joognimadeeda iyo Xusuusteedi hore ee Sooyaalka Heesaha iyo Fanka Soomaalida ka hadlaysana, Dalays waxay sheegtay in NInkii ugu horeeyay ee Raadiyaha Muqdisho ka heesa la oran jiray Cabduqaadir Xuseen Fuushane. Markaasna Miisaska ayaa la garaaci jiray oo Durbaan la tumaa ma oolin Raadiyaha, Qalab Miyuusig oo dhanna Hal Kaban iyo Fiyooliin unbaa laga heystay.
Sanadihii Xilligaas ka dambeeyay, Khadiija iyadoo Heesaha ku caan baxday ayeey Dhuumaaleysi Magaalada ku dhex mari jirtay, si aanay u waxyeeleyn Dadka oo markey arkaan Dhagaxya kusoo tuuri jiray, iyagoo ka careysan Gabadha Heeseysa ee Dhaqanka dumisay.
Markii Xoriyadda la qaatay, wuxuu Dalku yeeshay sida ay Dalays xustay, Laba Koox Faneed oo midi Raadiyaha Muqdisho tahay, tan kalena Raadiyaha Hargeysa ka timid. Kuwaas ayaana midoobay oo Heesaha iyo Bandhigyada kaleba ku howlanaa, illaa lagasoo gaaro 1965-kii oo Rag iyo Haween Kooxdaas laga bixiyay lagu biiriyay Koox ay Ciidamadu samaysteen oo Horseed loogu wan-qalay.
Kooxdaas Horseed bay ka hadashay Khadiija, waxayna sheegtay in Dadkii lagu biiriyay ay ku jireen, Sangub, Faadumo Muuse Wanaag, Seynab Baxsan, Nagruuma, Beer-Dilaacshe, Maxamed C. Kaariye, Haboon Cabdullaahi, iyo qar kale.
Aas-aaskii Hobalada Waaberi iyadoo ka warrameysana, Dalays waxay sheegtay in 1971-kii, uu Maxamed Siyaad Fanaaniinta kula kulmay Tiyaatarka Qaranka, kana codsaday inay Kooxahoodii kala duwanaa mideeyaan oo Koox qura kasoo saaraan. Markaasna waxaa Goobta Magaca Hobolada Waaberi kusoo bandhigay bay tiri Maxamed Cali Kaariye oo noqday Ninkii Magac bixintaas lahaa.
Intaas wixii ka dambeeyay, waxaa sii hana-qaaday Kooxdaas Waaberi oo ay Khadiijo sheegtay in 12 Hablood ay ku jireen, Fankaas la wada arkay ee Xoogeystay ayeeyna Udubka usii adkeeyeen.
Khadiija Cabdullaahi Cameey iminka waxay ku nooshahay Kanada, Mudada ay Fanka ku jirtana waxay sii dhaaftay Lixdan Sano. Waxayna aad ugu hanwayntahay inay tagto Dhulkeedii Hooyo oo ay Dagaalada ugagasoo carartay, gaar ahaanna halkii ay ku dhalatay iyo Gobalka Bay.
Riwaayadihii ay ka qayb gashay waa ay badnaayeen, waxaase laga xusi karaa NIMAAN JOOGIN MA JIRO, oo uu Xuseen Sheikh Axmed Kadare sameeyay, Cilmi iyo Caado iyo kuwo kale.
F.G: Waxaan jeclahay inaan sidan oo kale usoo uruuriyo unasoo gudbiyo, Sooyaalka iyo Taariikhaha qaar badan oo Hoobaladii Fankeena ee caanka ahaa ka mid ah, si Dad badan oo aan la socon Shaqsiyaadkaas ay wax badan u kororsadaan. Mahadsanidiin
W/Q: MOHAMED DHAALEEY
Wareysi uu Telefishinka Universal horay ula yeeshay Dalays